09.05.2020 Category: Wywiady
Kune zvakawanda zvekugovera vanotora kunze ukoń kuti vasarudze kubva, asi hazvisi nyore kuwana imwe ine nguva yakareba kupfuura yeRose Hosting. Yakatangwa mu2001, uyu mupi wekugovera ari muSt. Louis Missouri muUnited States pozwala inoshandisawo nzvimbo yake yedhesi. Iyo kambani inotaura kuti RoseHosting.com ndiyo yekutanga uye yega webhupu yekuchengetera kambani munyika kuti ipe vashandisi vashandisi veLinux kumashure zvakare mu 2001 (pasi peRose Web Services LLC) uye inokurudzira vatengi vayo kuti chuti.
Zvakanakira, Rose Hosting jest systemem Linux-roga iro rinosangana neVPS rinowanikwa (kunyange zvazvo kambani inopawo zvikamu zvose zvakagoverwa uye zvakatsaurirwa kugadzirirwa zvino).
2 Historia Historia w biznesie hostingowym
3 RoseHosting Hosting Services
5 Rabaty RoseHosting uye Dzidza Zvimwe
5.1 Specjalna zniżka RoseHosting
Ndapedza makore anopfuura 20 mukugadzira oprogramowanie do zarządzania hostingiem uye.
Historia Historia w biznesie hostingowym
Padanho rekutanga, Rose Hosting ndeye Missouri-yakavakirwa LLC iyo yandakatanga kumashure mu2001. RoseHosting.com ndiyo yakanyanya mhando uye yakakurumidza kuve mutungamiri muLinux VPS yekubata nzvimbo. Zvimwe zvedu zvimwe zvigadzirwa zvinosanganisira linuxcloudvps.com uye virtual-server.org, kunyange paine vamwe. RoseHosting.com inokwenayo nese midziyo yayo – ese ari pamusoro petambo – panzvimbo yedu yedhorobha mudhorobha St. Louis, isingasviki ma 50 mamaira kubva kunharaunda ye Stany Zjednoczone.
Chii chakafanana nebhizimisi raRoseHosting? Tinogona tutaj obraz nemafuta anonyanyisa pane nhamba yemadzimai kambani ikozvino inobata; uye hukuru hwekambani?
Nhamba yevashandi vakagadziriswa nevadzidzisi vanogara vachifamba, asi ikozvino kune 40. Pane imwe nhamba iyo iyo nhamba yeboka re Linux gurus rine ruzivo rwakakura runopa 24/7 kutsigire kune vatengi vuuuujaujaujauja..
Tichitarisa kupfuura boka redu remukati, ini handizivi chaizvo kuti mazita emasipirini edu emaoko edu anogadzirisa sei – sezvo ari oga, kunyange tisingagoni kuwana vazhinji vavo. Izvozvo zvakati, zvichibva pane zvatinonzwa kubva kune vatengi vedu, vamwe vevatengi vedu vanoita mazana emadunhu domeny – asi vamwe vasingatongedzi mazita zvachose paVPS yavo. Tinoziva kuti takashumira maService e-300 000 Linux chaiwo kusvika nhasi, kusanganisira vatengi vekare uye vekare.
Yedu 24/7 EPIC oparte na USA centrum pomocy technicznej oparte na Linux-ie guru vanoziva hurongwa uye teknolojia mune mukati nekunze. Vatengi vedu vanotitaurira kuti huwandu hweshumiro yatinopa hahuna kumboitika uye kuti, apo pavakatanga kutenga kutenga kubata, vainge vaine nguva yakaoma vachidavira kuti inogona kuiswa muzvirongongwa zvedu zvebak pasinai. Ichokwadi chaizvo-iwe unofanirwa kuzviwana kuti unzwisise kana kuti uchitenda.
RoseHosting VPS Price (lipiec 2014)
Rabaty RoseHosting uye Dzidza Zvimwe
Zvakanaka ndizvo zvese zvebvunzurudzo yangu. Kana uchida kudzidza zvakawanda nezvaRose – Heino yangu wongororo kuongorora. Zvimwe, unogona kushanyira RoseHosting online pa http://www.rosehosting.com kana kutevera panel hosta Twitter Twitter uye Facebook.
Specjalna zniżka RoseHosting
Ndanga ndiri kutevera RoseHosting uptime kubva muna listopad 2013 kushandisa Uptime Robot. Kuputira, heyi maviri mapikicha emazuva ano zvandine. Y
RoseHosting Past 30 Days Uptime (sierpień 2014)
Wynik Rose Kubata Uptime (marzec – kwiecień 2014): 99,97%
Saiba mais sobre hospedagem de sites, hospedagem de sites e outros serviços relacionados a
Kune zvakawanda zvekugovera vanotora kunze uko kuti vasarudze kubva, 아시아 hazvisi nyore kuwana imwe